Muqdisho: Tarsan oo xilka ku wareejiyey Muungaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur (Tarsan) ayaa maanta si rasmi ah xilkaas ugu wareejiyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Jen. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxey ka dhacday xarrunta maamulka gobolka Banaadir ku shaqeeyo waxaana ka qeybgalay masu’uuli badan oo ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan gudoomiyaahas degmooyinka Banaadir.
Wasiirka arimaha gudaha iyo Federaalka Xukuumadda Soomaaliya C/llaahi Goodax Barre, Wasiir kuxigeeno iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale ka q eybgalay xil wareejinta.
Guddoomiyihii hore ee Gobalka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur oo madasha ka hadlay, ayaa wuxuu ka sheekeeyay waxqabadkii maamulkiisa, mudadii uu haye xilka Guddoomiyaha Gobalka Banaadir iyo Duqa Muqdisho.
Wuxuu sheegay Tarsan inuu gobalka Banaadir yimid iyadoo waxba aysan oolin xarunta Gobalka Banaadir, Dowladda Soomaaliyana ay gacanta ku hayso kaliya 5 degmo oo ka tirsan Gobalka Banaadir.
Mr. Tarsan ayaa sheegay inuu utafaxeetay ka shaqeynta ammaanka caasimada Muqdisho, Nadaafada iyo sidii magaalada loo iftiimin lahaa, maadaama sida uu sheegay magaalada mugdi badan uu ka jiray.
Guddoomiyaha cusub ee Gobalka Banaadir Xasan Muungaab oo xaflada ka hadlay, ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo Guddoomiyihii hore ee Gobalka Banaadir Tarsan shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu kasoo qabtay Muqdisho.
Duqa cusub ee Muqdisho ayaa balan qaaday inuu la imaanayo qorshe weyn oo ammaanka caasimada Muqdisho lagu sugayo, waxaana uu sheegay in Saraakiisha Booliiska iyo Nabadsugida Gobalka ay hoostagayaan isaga.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 27-kii bishii hore ee Febaraayo gudoomiyaha gobolka Banaadir u magacaabay Xasan Maxamed Muungaab, iyadoo xilkaas laga qaaday gudoomiyihii hore Max’ud Axmed Nuur “Tarsan”, kaasoo xilkaas hayey tan iyo bishii July ee sanadkii 2010.
Axmed Madoobe oo Addis Ababa kula kulmay wasiirka arrimaha debadda Itoobiya